Ny dikan'ny loko volomparasy, violet ary lilac eo amin'ny tontolon'ny famolavolana | Famoronana an-tserasera
Loko volomparasy sy volomparasy ary lilac eo amin'ny tontolon'ny famolavolana
Any amin'izao tontolo izao misy loko an'arivony sy an'arivony maro miova arakaraka ny volony, ny hazavana ary ny karazany ny lokony ho. Ny fifangaroan'ny loko isan-karazany dia mety hiteraka fihetsem-po maro amin'ny olona, ​​satria ny loko sasany dia matetika no voafidy kokoa noho ny hafa ataon'ny olona iray. Izany dia satria ny loko dia mifandraika amin'ny tsirontsika, ny fihetsem-pontsika ary izay mahatonga ireo loko ireo ao amintsika.
Angamba manana ny loko tianao indrindra ianao, fa amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny loko tsara tarehy telo manokana izahay, Mampiseho ny hakantony, tanjaka ary hatsarana izy ireo. Volomparasy sy volomparasy ary lilac izy ireo. Ny fifangaroan'ireo loko ireo dia ampiasaina amin'ny faritra samihafa; tsy avy amin'ny famolavolana kanto ihany, fa amin'ny fiainana ary koa ireo loko telo ireo mety ho tandindona na fanehoana zavatra manokana.
1 Loko sy endrika
2 Violet dia voatanisa amin'ny toetra roa
Loko sy endrika
Volomparasy sy lilac dia loko volomparasy matetika, izay nalaina avy taminy ary manova ny tonony fotsiny.
Ity loko ity teraka tamin'ny fifangaroan'ny manga sy mena ary ny hamafin'ity dia hiankina amin'ny ambaratonga fanangonana izay vita amin'ny loko iray na hafa. Ny loko mavokely dia maneho ny mistika sy ny melankolika. Mpamorona sy manam-pahaizana momba ny zavakanto maro no nifanerasera volomparasy ho loko maneho ny toetra mampiditra, fahanginana ary milamina.
Raha miditra amin'ny sehatry ny siansa isika, Violet dia iray amin'ireo loko manana ny halavan'ny halavany fohy indrindra, izany hoe, afaka mahita azy isika amin'ny faran'ny spektrum hita maso. Ireo onja ireo dia tsapan'ny mason'olombelona, ​​fa rehefa mihoatra ny zavatra hitan'ny maso ireo onja dia antsoina hoe "ultraviolet" izy ireo. Ankoatr'izay, amin'ny volomparasy Io dia ny fifangaroan'ny manga sy mena, fa raisina ho toy ny volomparasy maivana. Izany no antony tsy ametrahana azy ao anaty faribolana maro loko, satria volomparasy misy tonony ambany kokoa izy io.
Violet dia voatanisa amin'ny toetra roa
voalohany, Violet dia heverina ho loko mamy satria mena io. Toy izany koa, ny loko volomparasy dia heverina ho loko manaitaitra ihany koa noho ny lokony manga. Raha ny momba ny solontena, ny loko volomparasy dia nampiasaina tamin'ny fivavahana, satria maneho dogma sy fivalozana amin'ny alalany. Ary raisin'izy ireo ho ny lokon'ny fisaintsainana.
Ny loko volomparasy dia mifandray akaiky amin'ny saina ary noho izany dia afangaro amin'ny fahendrena sy fahatsiarovana izany. Na eo aza ireo toetra mahafinaritra rehetra ireo, ny violet dia misy lafy ratsy, araka ny fiheverana azy loko mifandraika amin'ny hatezerana, fitiavantena sy fanirery.
Ny loko volomparasy sy ny karazany avy aminy manana endrika manangoly ary heverina ho loko mifandraika amin'ny filan'ny nofoMisaotra ny mena, fa noho ny singa manga ao aminy dia afangaro amin'ny alahelo koa izy, na dia misy ifandraisany amin'ny aretina aza. Ireny bao roa ireny dia mahatonga loko volomparasy ho loko miovaova be.
Io fiovana io dia miankina amin'ny fironana mankany amin'ny manga na mena izay anananao.
Ohatra, mivadika lilac ny volomparasy amin'ny tranga sasany, ka lasa loko izay maneho fifantohana tsara. Fa rahoviana mivadika volomparasy ny violet, avy eo mifandraika amin'ny fifandanjana sy ny fahamarinana. Ary koa, ny volomparasy dia azo raisina ho hery marina, fifandanjan'ny herin'ny fiainana, fahendrena ary hery ara-panahy.
Violet matetika dia mifandray amin'ny hatsiaka ary heverina ho manjaka, mpanjaka, mihoa-pampana, mendri-kaja ary mieboebo. Ny sasany mampiasa volomparasy hanehoana ny fametraham-pialana, ny tsy fahatapahan-kevitra, ny fihoaram-pefy, ny fihenan'ny fanentanana ataon'ny olombelona. Mampiasa violet matetika ny fiangonana katolika ary misolo tena manokana izany mandritra ny herinandro masina.
Ao amin'ny Karemy, amin'ny varotra, ny Advento amin'ny vavaka ary amin'ny inefatra ao amin'ny fiangonana katolika dia azo jerena ny fisian'ny volomparasy. Na ny volomparasy aza dia ampiasaina amin'ny vatan'ny eveka sy kardinaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Loko volomparasy sy volomparasy ary lilac eo amin'ny tontolon'ny famolavolana
Luis Montanez dia hoy izy:
Fandraisana anjara lehibe ... Io irery no loko tiako indrindra.
Valiny tamin'i Luis Montañez
Zava-dehibe ny loko raha resaka famolavolana
Ny fitaovana fanaovana atidoha na atidoha ho toy ny teknika hampivelarana tetikasa sary